Katalog outdoor SAUNA | BadeBOTTI.CH – ဆွစ်ဇာလန်မူရင်းကတည်းက 2004
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥယျာဉ်ကို sauna အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်- ကမ်းလှမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကက်တလောက်ထဲတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်.
(3,464 ဒီ post ကိုကြည့်ရှုပြီးမှအဘယ်သူသည်ဧည့်သည်များ)
4 အပေါ်အတွေးများKatalog outdoor SAUNA”
Bucher Beat လို့ပြောတယ်:
20. နိုဝင်ဘာ 2015 မှာ 9:33
ငါ့ကိုအသင်တို့၏ catalog နှင့်စျေးနှုန်းစာရင်းပေးပို့ပါ.
မေးခွန်း: သင်သည်သင်၏ sauna များကိုဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက်ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်?
21. နိုဝင်ဘာ 2015 မှာ 16:51
မင်္ဂလာပါ Mr. Bucher
သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. နှင့်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ sauna များကိုဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက်နှင့်လည်းလည်ပတ်နိုင်သည်. စာရွက်စာတမ်းများကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ပြီးပါပြီ.
ကျွန်ုပ်တို့ကူညီမှပျော်, ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ, တယ်လီ. 052 347 37 27.
Niklaus Heinimann လို့ပြောတယ်:
12. ဇူလိုင်လ 2014 မှာ 11:58
13. ဇူလိုင်လ 2014 မှာ 17:27
မင်္ဂလာပါ Mr. Heinimann
သင့်တောင်းဆိုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင်ကိရိယာအစုံမှလျှပ်စစ်သို့မဟုတ်သစ်သားမီးဖိုဖြင့်စုစည်းထားသောချွေးပေါင်းအိမ်အထိအမျိုးမျိုးသောချွေးပေါင်းအိမ်မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည် Harvia Finland မှအရည်အသွေးမြင့်သောချွေးပေါင်းထုတ်စက်များကိုသာအသုံးပြုသည်. ဖောက်သည်သည်အပူပေးစက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်သည်. လျှပ်စစ်အပူပေးစက်တွင်အဝေးထိန်းစနစ်နှင့်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းအပြင်ရေနွေးငွေ့အခန်းလုပ်ဆောင်ချက်သို့မဟုတ်ဇီ ၀ ဆိုလာအတွက်ပေါင်းစပ်အပူပေးစက်တစ်ခုရှိသည်။.
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ပါ, တယ်လီ. 052 347 37 27.
ဤ site သည် spam များကိုလျှော့ချရန် Akismet ကိုအသုံးပြုသည်. သင်၏ထင်မြင်ချက်အချက်အလက်များကိုမည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်သည်ကိုလေ့လာပါ.
BADEFASS ဖွင့်ထားသောလေထဲတွင် Baden .. အာရဇ်ပင်ပူ tubs Clear ကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်… (12,917)
ဥယျာဉ်ကိုပြုစု SAUNA သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်တော်၌အဖြေသေးငယ်ကျန်းမာအိုအေစစ် .. စည်ပိုင်းချွေးပေါင်းအိမ်သင်ခွင့်ပြု… (6,758)
သစ်သားရေပူကန် မြောက်ပိုင်းကနေဒါ NATURA ကနေသစ်သားမီးဖိုနှင့်အတူဂန္ပူ tubs အဆိုပါဖြစ်ပါသည်… (6,733)
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း BADEFASS ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူ tubs အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ catalog ထဲမှာကမ်းလှမ်းမှုသည်။… (6,320)
ဧည့်သည်များမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ / စျေးနှုန်းတွေ ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူအားလုံးဧည့်သည်များတောင်းဆိုမှုများကိုစာရင်းပြုစုထားပါပြီ. သင်ရှိသည်… (5,054)
သစ်သား WHIRLPOOL Classic နှင့်အချစ် - နည်းပညာနှင့်အတူသုံးစွဲခြင်း၏ရေချိုးအပျော်အပါးနှင့်ငြိမ်ဝပ်တွဲကိုစလှေတျ… (4,751)
စျေးနှုန်းစာရင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံစျေးနှုန်းစာရင်းပါဝင်သည်: hot tubs Pod ချွေးပေါင်းအိမ်တပ် ချ. ဥယျာဉ်ချွေးပေါင်းအိမ် Huttengrill အိမ်သူအိမ်သားကင်တဲမီးဖို… (4,730)
Europa-line မဟုတ်ဘဲအရေအတွက်ထက်အရည်အသွေးပြည့် .. ငါတို့၏ဥရောပလိုင်းအလိုလိုမြင်သည်အရာ. အရည်အသွေးမြင့်… (4,612)
outdoor Sauna နွေရာသီအိမ်တော်သို့ ဥရောပ ထင်းမီးဖို Sauna တဲ siberian larch ချမ်းသာရေးသင်တန်း-chat ပစ္စည်းများ စျေးနှုန်းတွေ နမူနာပုံများ ThermoWood Suisse outdoor Sauna Primo ကင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ တင်ဆောင် KanadaFASS အနောက်တိုင်းနီအာရဇ် စည်ပိုင်း ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေး အဖြူအာရဇ် သစ်သားမီးဖို အသားကင်အိမ် PrimoGRILL Badefass Saunahütte Grillhaus ဥယျာဉ်ကိုရေချိုးစည် ဒေါင်းလုပ် မှတ်တမ်း Dampfsauna ချမ်းသာရေးသင်တန်းသည်ဆိုင် ညွှန်ကြားချက်များ သြစတြီးယား Ofuro ရေပူကန် WellnessFASS ဥရောပ ဝက်သစ်ကျပင် ဧဒုံ Ceadr တယ်လီဖုန်းနံပါတ် Whirlpool Kiefer WellnessFASS Larch အခွင့်အာဏာ ဖင်လန် Sauna